Global Voices teny Malagasy » Fahatsiarovana ny Tiananmen ao Hong Kong: Hetsi-pifandanana miha-mampididoza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Jona 2021 4:27 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Sambany tamin'ny taona 2020 ny polisin'i Hong Kong police nandrara ny hetsika , nanonona ny fepetra iadiana amin'ny coronavirus. Victoria Park no zaridaina hanatontosana ny fijoroana.
Nampitandrina ny Sekretera Misahana ny Filaminana ao Hong Kong, John Lee, tamin'ny alalan'ny Hitsivolana Filaminam-bahoaka (Public Order Ordinance), fa mety hiatrika famonjàna hatramin'ny dimy taona  [mg] izay manitsakitsaka ny lalàna amin'ny alalan'ny fanatrehana fijoroana, na hatramin'ny herintaona amin'ny fampiroboroboana azy.
Rehefa voarara ny fijoroana, nampirisihan'ny  mpanolotsaina ara-politikan'i Beijing momba ny raharaha Hong Kong, Tian Feilong, ny sampan-draharaham-pilaminana Hong Kong hanao famotorana ny HK Alliance noho ny fanitsakitsahany ilay lalànan'ny fiarovam-pirenena malaza ratsy  izay natsindrin'i Beijing an'i Hong Kong tamin'ny herintaona.
Nandresy lahatra  izy fa manitsakitsaka ny lalàna ny fanambaràna ho iraky ny fikambanana izay miantso ny hamaranana ny jadon'antoko tokana, satria voasoratra ao anatin'ny lalampanorenana shinoa ny jadon'Antoko Komonista Shinoa.
Tamin'ny 3 jona, nampitandrina  ny mpikambana ao amin'ny Vaomiera Mpanatanteraka Ronny Tong fa mety ho azo tsaraina ho manitsakitsaka io lalàna io na ny lalànan'ny fanaovana fivoriana tsy nahazoana alalana ny olona manao akanjo mainty sy mihiaka toy ny hoe “farano ny jadon'antoko tokana”.
Hita  any amin'ny distrika isankarazany manerana ny tanàna ny afisy 4 jona maro dia maro.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/06/06/152899/
 nandrara ny hetsika: https://globalvoices.org/2020/06/02/hongkongers-strive-to-remember-tiananmen-crackdown-despite-ban-on-candlelight-vigil/
 mety hiatrika famonjàna hatramin'ny dimy taona: https://mg.globalvoices.org/2021/05/31/152855/
 lalànan'ny fiarovam-pirenena malaza ratsy: https://globalvoices.org/2020/07/02/made-in-china-the-draconian-details-of-hong-kongs-national-security-law/